China Green Tea Chunmee 9368 umzi-mveliso kunye nabavelisi |Yibin Tea
Chunmee tea 9368
I-Chunmee tea 9368 ithatha amagqabi eti okanye i-buds, ngenkqubo yokunyanga, ukubumba, ukomisa, ukugcina izinto zendalo zamagqabi amatsha, aqulethe i-polyphenols yeti, i-catechin, i-chlorophyll, i-amino acids kunye nezinye izondlo. d'Ivoire, eGuinée, eGuinée-Bissau, eGambie
Iti eluhlaza chunmee
Intambo ecikizekileyo, i-uniform homogeneous equatorial
Yingcamla yomelele kwaye ithambile, ikrakra kancinci
Imozulu yaseAfrika ishushu kakhulu kwaye yomile, ngakumbi eNtshona Afrika, ekwiNtlango yeSahara okanye ekufutshane nayo.Ubushushu obungapheliyo abunyamezeleki.Ngenxa yobushushu, abantu basekuhlaleni babila kakhulu, batya amandla amaninzi omzimba, kwaye ubukhulu becala baxhomekeke enyameni kwaye baswele imifuno unyaka wonke, ngoko basela iti ukuze bathobe igrisi, bathobe unxano nobushushu, kwaye bongeze amanzi kunye neevithamini. .Ke ngoko, abantu baseAfrika abaselanga kakhulu njengokusela iti njengento eyimfuneko njengokutya.
Abantu baseNtshona Afrika baqhele ukusela iti ye-mint kwaye bathanda le mvakalelo yokupholisa kabini.Xa besenza iti, bafaka iti ephindwe kabini kunaseTshayina, bagalele iityhubhu zeswekile namagqabi eminti ukuze bangcamle.Emehlweni abantu baseNtshona Afrika, iti sisiselo sendalo esinevumba elimnandi nesithambileyo, iswekile sisondlo esinencasa, yaye iminti sisiselo esihlaziyayo sokuphelisa ubushushu.Ezi zintathu zidibanisa kunye kwaye zinencasa emangalisayo.
AmaYiputa ahlala kumntla-mpuma weAfrika adla ngokusela iti xa esonwabisa iindwendwe.Bathanda ukufaka iswekile eninzi etini, basele iti eswiti, baze basele le tiyi eneswiti ngeglasi yamanzi abandayo ngaxeshanye.Le iti ineswiti kangangokuba abantu abaninzi baseAsia basenokungayiqhelanga.
Uninzi lwabantu base-Afrika bathanda ukusela iti eluhlaza ngenxa yokuba bathanda uhlaza kwaye banqwenela uhlaza kwindawo abahlala kuyo, kwaye ngenxa yokuba iti eluhlaza inokuhlaziya unxano lwabo, ikhuphe ubushushu kwaye ikhulule ukutya.Incasa yayo ekhethekileyo kunye nokusebenza kwayo yeyona nto ifunwa ngabantu baseAfrika ngokukhawuleza phantsi kweemeko ezizodwa zokuphila.
Ngaphambili: Iti eluhlaza iChunmee 9369
Okulandelayo: Iti eluhlaza iChunmee 8147
4011 iTea eluhlaza eNgcacisiweyo yaseChunmee
Iinzuzo Chunmee Green Tea
Iti eluhlaza yaseChunmee
Iti eluhlaza iChunmee 41022AAAAAA
Iti eluhlaza iChunmee 41022AAAA